Awood siinta iyo taageerida dadka la nool ama ay saameysay HIV / AIDS ee Maine iyada oo loo marayo daryeelka isku dhafan, waxbarashada, u doodista, iyo adeegyada ka hortagga.
Iyadoo loo marayo hal-abuurnimo sii socota iyo hanaan macmiil u heellan, waxaan saadaalineynaa dhammaadka gudbinta HIV iyo dhimashada la xiriirta AIDS-ka.
Xarunta Frannie Peabody waxaa wada taariikhdeena ballaadhan ee bixinta adeegyada ku saleysan macmiilka iyo taageerida dadka la nool ama ay saameeyeen HIV / AIDS, xaaladaha isla dhaca, iyo caqabadaha daryeelka. Xarunta Frannie Peabody waxay kobcisaa naxariis, adkaysi, geesinimo, daahfurnaan, ka-qaybgalid, iskaashi, iyo hal-abuurnimo, iyadoo ku sii nagaanaysa yoolalkayaga ah inaan taageerno caafimaad joogto ah macaamiisheenna iyo bulshada guud ahaan.
Moodelkeenna: Adeegyada duuduubka ah ayaa koofiyadu taageertaa caafimaadka joogtada ah
Bixinta marin u helka daryeelka iyada oo loo marayo maareynta kiisaska , la-talinta caafimaadka hab-dhaqanka , iyo barnaamijyada kaalmada guryeynta ayaa ka taageera shakhsiyaadka u hoggaansamaya daawada halista ah ee HIV, sidaasna hoos ugu dhigaya culeyska fayraska HIV Xannibaadda culeyska fayraska ee joogtada ah waxay yareyneysaa halista gudbinta HIV waxayna gacan ka geysaneysaa caafimaad iyo caafimaad waara. Adeegyadeenna yareynta halista, waxbarashada, iyo adeegyada baaritaanka HIV-ga waxay bulshada siiyaan aalado sida ugu wanaagsan u dabooli kara baahiyaha shaqsiyeed ee looga hortagayo infekshinka HIV.
Macaamiisha Xarunta Frannie Peabody waxay la kulmaan caqabado badan oo kala duwan waxayna ka yimaadaan dhaqamo kala duwan oo dhaqameed. Macaamiisha waxay u dhexeeyaan da 'yar ilaa dhowr iyo todobaatan jir, waxayna matalaan dhowr jinsi, qowmiyado, iyo dalal asal ahaan ka soo jeeda, taasoo muujineysa xaqiiqda ah in HIV / AIDS-ka uu dhamaanteen na saameynayo.
Xarunta Frannie Peabody waxay u adeegtaa in kabadan 400 oo qof oo qaba cudurka HIV / AIDS sanadkii:
60% waxay ku hoos nool yihiin khadka Saboolnimada ee Federaalka
35% ayaa ka badbaaday rabshada guriga
33% waxay leeyihiin taariikh ama hada hoy la’aan
75% waxay la tacaalayaan ku xadgudubka mukhaadaraadka iyo / ama arrimaha caafimaadka maskaxda
Xarunta Frannie Peabody waa 501 (c) 3 hay'ad samafal ah. Barnaamijyadeennu waxay dhaqaale ka helaan ilo kala duwan, oo ay ka mid yihiin: Qaybta B ee Xeerka Casriyeynta Daaweynta Ryan White, Xarumaha Maraykanka ee Xakamaynta & Kahortagga Cudurrada (CDC), Fursadaha Guryeynta ee Dadka qaba AIDS-ka ee Waaxda Guryeynta & Horumarinta Magaalooyinka Mareykanka (HOPWA), Xarunta Maine ee Xakamaynta & Ka-hortagga Cudurrada, Xafiiska Maine ee Adeegyada MaineCare, United Way of Greater Portland iyo Degmada York, iyo sidoo kale aasaasyo kale oo gaar loo leeyahay.
"Frannie waxay qaadatay dhaqdhaqaaqii ugu dhawaa ee aan muuqan ee firfircoonida AIDS-ka ee Maine waxayna kadhigtay si dhaqso leh xushmad… Waxaan ujoognay inaan joojino cudurka, wax yarna majiraan, Frannie waxay noqoneysaa Joan of Arc." - John Preston
Halkan guji si aad waxbadan uga akhriso Frannie
Michael R. Stevenson, PhD, Madaxweyne
Michael McDonald, Madaxweyne ku-xigeenka
David Masengesho, Khasnaji
Justin Burkhardt, Xoghayaha
Halkan riix si aad uhesho bios buuxa